ဝက်သားတုတ်ထိုး အိမ်မှာလုပ်စားကြည့်ရအောင် | Wutyee Food House
ကြက်တောင်ပံ အစားသွပ် »
January 6, 2010 by chowutyee ၀က်သားတုတ်ထိုး
၁။ ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ၀က်အစုံ (၀က်အူမ၊ ၀က်နားရွက်၊ ၀က်အရွတ်၊ ၀က်ကလီစာ၊ ၀က်အသဲ၊ ၀က်အူ၊ ၀က်သား) – ၁ပိသာ
၂။ ခရုဆီ – စားပွဲတင်ဇွန်း ၅ဇွန်း
၃။ ပျားရည် – စားပွဲတင်ဇွန်း ၁၀ဇွန်း
၄။ ပဲငံပြာရည် အနောက် – စားပွဲတင်ဇွန်း ၅ဇွန်း
၅။ ရှာလကာရည် – စားပွဲတင်ဇွန်း ၄ဇွန်း
၆။ နတ်နတ်ပွင့် – ၇ခု
၇။ သစ်ဂျပိုး – ၄ခု
၈။ ကလဝေရွက် – ၆ခု
၉။ နတ်မတ် (nutmeg) – ၂ခု (ခြစ်ထည့်ပေးပါ)
၁။ ၀က်အစုံ များကို အတုံးကြီးကြီး တုံးပါ။
၂။ ပြီးလျှင် ၀က်အစုံအားလုံးကို ( ဆား(လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁၀ဇွန်း)၊ ကြက်သားမှုန့် (လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၇ဇွန်း)၊ သကြား (လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ဇွန်း)၊ ခရုဆီ၊ ပဲငံပြာရည်အနောက်၊ ပျားရည်၊ ရှာလကာရည်၊ နတ်နတ်ပွင့်၊ သစ်ဂျပိုး၊ ကလဝေရွက်၊ နတ်မတ် ) ထည့်ရောနုယ်ပေးပြီး ၃နာရီခန့် ရေခဲသေတ္တာထဲတွင် နုပ်ထားပေးပါ။
၃။ မချက်ခင် ရေခဲသေတ္တာထဲမှ နာရီဝက်ခန့် ကြိုထုတ်ထားပါ။
၄။ ပြီးမှ ဒယ်အိုးကြီးထဲ ဆီ(စားပွဲတင်ဇွန်း ၅ဇွန်း) ထည့် နုယ်ထားသော ၀က်အစုံကို ထည့်မွှေပေးပါ။
၄။ ဆီပြန်လျှင် ရေကို ၀က်အစုံမြုပ်သည်အထိထည့် မီးပြင်းပြင်းဖြင့်တည်ထားပေးပါ။ ရေခန်းပြီး ဆီပြန်လာလျှင် ၅ကြိမ်ခန့် ရေထပ်ထည့်ပြီး တည်ပေးပါ။
၅။ ၀က်အစုံနူးအိလာပြီး ဆီပြန်လာပြီးဆိုလျှင် ဆော့ရည်အနည်းငယ်ချန်၍ မီးပိတ်လိုက်ပါ။
၆။ ထို့နောက် ၀က်အစုံကို ပါးပါးလှီးပြီး တုတ်ထိုးပြီး ရလာသော ဆော့ရည်နှင့်လည်း တွဲဖက်စားနိုင်ပါသည်။
၇။ ၀က်အစုံကို ပါးပါးလှီးပြီး ပန်းကန်ပြားကြီးကြီးပေါ်တွင် စီထည့်လိုက်ပါ။ ပြီးမှ ၀က်အစုံမှ ဆော့ရည်များကို လောင်းချလိုက်ပါ။
၈။ ကိုယ်အိမ်တွင် အလွယ်တကူလုပ်စားနိုင်မည့် ၀က်သားတုတ်ထိုးရရှိပါသည်။ ၀က်သားတုတ်ထိုးကို ငရုတ်သီးဆော့နှင့်တွဲဖက်စားနိုင်ပါသည်။
-၀က်သားတုတ်ထိုးကို အားလုံးလိုလိုကြိုက်နှစ်သက်ကြပါတယ်။ ၀တ်ရည်ကိုယ်တိုင်လည်း အလွန်ကြိုက်နှစ်သက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အများစုက အပြင်ကပဲ ၀ယ်စားလေ့ရှိကြတယ်။ အိမ်မှာလည်း ၀က်သားတုတ်ထိုး လုပ်စားနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပြီးတင်ဖြစ်သွားတာပါ။
Posted in တရုတ်ဟင်း ချက်ပြုတ်နည်း, အဓိက ဟင်းလျာများ | 68 Comments	68 Responses
on January 6, 2010 at 10:07 am | Reply hmone gyi
wow eat chin tal……ku😦 miss the food….
on January 6, 2010 at 10:12 am | Reply chowutyee
ကိုယ်အိမ်မှာ ချက်စားလို့ရအောင် ရေးပေးထားတာ….
on November 2, 2013 at 5:20 pm | Reply ကိုစန်း
၀က်သားဒုတ်ထိုးကို အရမ်းသဘောကျတယ် ညီမရေ အဆောင်မှာလုပ်စားမယ်
on January 6, 2010 at 12:37 pm | Reply leo
စားချင်လိုက်တာဗျာ။။။ ဟီး…အဲဒါနဲ့ ပျက်နေတာ နှစ်နဲ့ချီ ပြီးကြာနေပြီး … ခုတော့ လာသွားရည်ကျသွားပါတယ်။း)
on January 9, 2010 at 11:05 am | Reply chowutyee
လုပ်စားကြည့်ပါလား လွယ်ပါတယ်.. ပါဝင်တချို့ပစ္စည်းတွေ အိန္ဒိယဆိုင်တွေမှာ ရောင်းပါတယ်။
on January 9, 2010 at 4:32 pm | Reply Zaw Ye Myint
wow. wat tar dot thoo ta char mah ma sar buu puu
on January 12, 2010 at 8:41 am | Reply kozeyar
၀တ်ရည် ကျေးဇူး … ဒီနည်းသိချင်နေတာ ကြာဘီ။
ရှလွှတ် .. ကြိုပြီးတောင် သွားရည်ယိုလာဘီ။ ရေးထားတာ ရှင်းရှင်းလေးနဲ့ မှတ်မိလွယ်တယ်။
on January 12, 2010 at 11:27 am | Reply chowutyee
ကိုဇေယျာ ၀က်သားတုတ်ထိုးချက်နည်းက လွယ်ပါတယ်.. ၀တ်ရည်လည်း မသိခင်တုန်းက ခက်တယ် ထင်နေတာ။ Christmas ၀က်သားတုတ်ထိုး အဲနည်းတိုင်း လုပ်စားသေးတယ်၊ တော်တော်ကောင်းတယ်….
on January 17, 2010 at 8:16 am | Reply kozeyar
ဒီနေ့ ချက်စားလိုက်တယ်ဗျို့ …
ပါဝင်ပစ္စည်းနဲနဲမစုံတာရယ် .. အဆင့်တစ်ချို့ ကျော်သွားတာရယ် ရှိပေမယ့်၊ အတော် နီးစပ်တဲ့အရသာရတယ်။ နောက်ကျ သူငယ်ချင်းတွေကို လုပ်ကျွေးရဦးမယ်
on January 17, 2010 at 10:07 am | Reply chowutyee
ကိုဇေယျာခုလို ချက်လို့ ကျေးဇူးပဲနော်…..🙂
on February 17, 2010 at 8:54 am | Reply Ma Khine
ဒီနည်းနဲ့လုပ်စားကြည့်ဦးမယ်
ညီမရေ ~ နတ်မတ် (nutmeg) က ဘယ်လိုဟာလဲဟင်?
တုတ်ထိုးနဲ့စားတဲ့ အချဉ်ရော ဘယ်လိုဖျော်ရင် ကောင်းလဲဟင်?
on February 17, 2010 at 10:49 am | Reply chowutyee
မခိုင်ရေ ၀က်သားတုတ်ထိုး စမ်းလုပ်ကြည့်ပြီးရင် ပြန်ပြောပြပါအုန်းနော်…
နတ်မတ်ကို ဘယ်လို ရှင်းပြရမလဲ ဆိုတော့ နတ်မတ်က ချောကလက် စားရင်ပါတဲ့ မြေပဲ အကြီးလိုပုံစံမျိုးပဲ.. သူကို ခြစ်တံနဲ့ ခြစ်ထည့်ရတာ၊ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင် ရောင်းတဲ့ ကုန်စုံဆိုင်တွေမှာ ၀ယ်လို့ရတယ် မခိုင်။
၀က်သားတုတ်ထိုး ဆော့အချဉ်ရည်ဖျော်နည်းကတော့ ရိုးရိုး ဆော့ကို ထန်းညက်အမဲနည်းနည်းထည့် ကျိုပြီး၊ ဆားအနည်းငယ်ထည့်ပါ။ ပြီးလျှင် အရသာ အပေါ့၊ အငံမြည်းလိုက်ရုံပဲ…
on February 22, 2010 at 1:31 pm | Reply Kinmayoo
on February 22, 2010 at 4:29 pm | Reply chowutyee
😉 Thanks you too
on February 24, 2010 at 9:04 pm | Replyူမတ်လေးပန်း
nutmeg က ဗမာလို ဇာလိပ်ဖုသီး လို.ခေါ်တယ်စာလုံးရှာမတွေ.လို. ရေးတတ်သလို ရေးသွားတယ်နော်
on February 25, 2010 at 5:01 am | Reply chowutyee
ကျေးဇူးပဲနော် မမြတ်လေးပန်း..း)
nutmeg က ဗမာလို ဇာလိပ်ဖိုသီး လို.ခေါ်တယ်စာလုံးရှာမတွေ.လို. ရေးတတ်သလို ရေးသွားတယ်နော်
on February 28, 2010 at 2:46 am | Reply Ma Khine
ဝက်သားတုတ်ထိုး ဝတ်ရည်နည်းနဲ. လုပ်စားဖြစ်ပါတယ် ..
ဒီတခါ တော်တော် အဆင်ပြေတယ်လို့ထင်တာပဲ .. အရသာရော အရောင်ရော ..
nutmeg က အမှုန့် လုပ်ပြီးသားရတယ် .. နတ်နတ်ပွင့် တခုပဲ မရလို့မထည့်လိုက်ရဘူး .. အိမ်ရှင်မလက်ရာမှာ ဓါတ်ပုံတင်လိုက်မယ်နော် ..
on February 28, 2010 at 2:48 am | Reply chowutyee
တင်လိုက်ပါနော် မခိုင်၊ ၀တ်ရည်လည်း မြည်းချင်လို့ပါ.. ခုလို ချက်စားလို့ မခိုင်ကို အရမ်းလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်😉
on March 1, 2010 at 2:18 am | Reply shwe zin
Hi, Nice to meet you, Ma With Yee. Sorry for if i wrong my spelling to your name. I am looking forward for your new post. Thank you for your sharing.
on March 1, 2010 at 2:20 am | Reply shwe zin
I pray to you cook many much more curry .
on March 1, 2010 at 3:26 am | Reply chowutyee
I m also really nice to meet Shwe Zin.. Thanks you so so much…😉
on March 24, 2010 at 5:26 pm | Reply thant
wutyee,,yay..thanks alot4this post par naw.
on March 25, 2010 at 6:51 am | Reply chowutyee
့hee No problem Thant…😉
on March 26, 2010 at 9:34 am | Reply thant
wutyee yay,yesterday i cooked wat tar dot thoo by ur recipe i add ginger, garlic ,, not so bad la, truly thank u so much becoz last time i didn’t kn need2put honey but after i read ur post i cooked it very nice…..
thx again par naw…
on March 26, 2010 at 11:02 am | Reply chowutyee
on April 12, 2010 at 12:29 am | Reply KoTharGyi
ကျေးဇူးပဲမ၀တ်ရည်ရေ။ ငယ်လားကြီးလားတော့ မသိဘူး။
လေးစားသမှူနဲ့ မ တပ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။
ကျွန်တော်လုပ်စားတာ တော်တော်ကြာပြီ။ လုပ်တိုင်းလဲ တခုမှမဟုတ် တခုက လိုနေတာပဲ။ ဒီလိုနည်းစနစ်မမှန်တော့ သိမဂွတ်ဘူးဗျ။
ဒီတစ်ခေါက် သင်္ကြန်တွင်း ကျောင်းပိတ်ရက်မှာ လုပ်ကြည့်လိုက်အုံးမယ်။
on April 12, 2010 at 4:09 am | Reply chowutyee
လုပ်စားကြည့်ပါနော် ကိုသားကြီး.. ၀တ်ရည်က ခုဇွန်မှာ ၂၅နှစ်ပြည့်မှာပါ။🙂
on April 12, 2010 at 9:40 am KoTharGyi
၁ နှစ်ထဲပဲပေါ့။ ကျွန်တော်ကတော့ နိုဝင်ဘာ ၇ ရက်နေ့ကျမှ ပြည့်မှာ။
on July 7, 2010 at 1:15 pm | Reply Hla Yamin Khine
on July 9, 2010 at 4:30 am | Reply chowutyee
on July 11, 2010 at 2:53 am | Reply ma lay
on July 12, 2010 at 10:21 am | Reply chowutyee
ဟုတ်ကဲ့ပါ မလေး၊ ချက်စားကြည့်ပါနော်..
on July 12, 2010 at 8:33 am | Reply alex
thanks you par..
on July 12, 2010 at 10:23 am | Reply chowutyee
You r so welcome!🙂
on July 22, 2010 at 4:24 am | Reply hninei
၀တ်ရည်ရေ ..သိချင်တာလေးတခုရှိလို့ …
၀က်သားတုတ်ထိုးလုပ်ဖို့ ၀က်ကလီစာတွေက သန့်စင်ပြီးသားမှ လုပ်ရတာလား .. မသန့်သေးတာတွေကော ဘယ်လိုသန့်အောင် လုပ်ရသလဲ ဟင် ?..
on July 22, 2010 at 11:10 am | Reply chowutyee
နှင်းအိရေ… ၀က်ကလီစာကို သန့်စင်အောင် လုပ်ပြီးမှ ချက်ရတာပါ။ ၀က်ကလီစာမှာပါတဲ့ နားရွက်ဆိုရင် အမွှေးစင်အောင် ခြစ်ပေးရပါမယ်.. အူတို့၊ အူမတွေကိုလည်း ချီးတွေကို ရေနဲ့ အားလုံး သန့်အောင်ထိ ဆေးပေးရပါမယ်။ သန့်စင်သွားပြီဆိုမှ ဟင်းစချက်ရမှာပါ..😉
on August 8, 2010 at 4:43 am | Reply Zar Nyi Aung
on August 8, 2010 at 10:06 am | Reply chowutyee
မဇာခြည်၊ အူချိုလို့ ဈေးမှာ ပြောဝယ်လို့လည်း ရပါတယ်… အူချိုက အသေး၊ အူမက အကြီးပါ။ အူမက သေချာ မဆေးရင် ခါးပါတယ်။
– အူမကို ထုံးရည်နဲ့ ဆေးလို့လည်း ရတယ်။
– နောက်တစ်နည်းအနေနဲ့ အူမကို ရေနဲ့ စင်အောင်ဆေးပြီ အထဲက ပါတာတွေ အားလုံး ဆေးပစ်ရပါမယ်။ ပြီးမှ ရေနွေးနဲ့ ဆေးပစ်လည်း ရပါတယ်။
– ထပ်ချက်ကြည့်ပါအုန်းနော်။ အဆင်မပြေတာ ရှိရင်လည်း ပြောပါ..🙂
on August 24, 2010 at 10:27 am | Reply Nai
I tried this recipe and it was really nice.
on August 25, 2010 at 3:16 am | Reply chowutyee
Nai ကိုလည်း ကျေးဇူးပါ….🙂
on October 7, 2010 at 1:58 pm | Reply san san
၀တ်ရည်ရေ နတ်မက်ကို ဘယ်လိုဝယ်ရမလဲ ပစ္စည်းမစုံသေးလို့ လုပ်မစားရသေးဘူး။ မြန်မာဆိုင်တို့ ထိုင်းဆိုင်တို့မှာရောင်းလားမသိဘူးနော်။
on October 7, 2010 at 2:48 pm | Reply chowutyee
san san ရေ နတ်မက်ကို မြန်မာဆိုင်ထက် အိန္ဒိယ ကုန်စုံဆိုင်မှာ ပိုရနို်င်လောက်တယ်….🙂
on December 6, 2010 at 3:25 pm ma mie
ma wutyee ,if u don’t mind what is look like နတ်မက် ? pls next time when u cook , pls make the pic of နတ်မက် .thank u par
on December 7, 2010 at 5:12 am | Reply chowutyee
Ma Mie ရေ ၀တ်ရည် နောက်တစ်ခါ လုပ်စားရင် သေချာ ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီ တင်ပေးလိုက်ပါ့မယ်…
on December 23, 2010 at 3:23 pm | Reply hnin
သကြားကိုနီလာအောင်ဆီသတ် နီလာတာနဲ့ နတ်နတ်ပွင့်(ကြယ်)နဲ့ သစ်ဂျပိုး (တုတ်) နဲနဲဆီထည့်ပြီး အနံရလာတဲ့အထိထား (အကြာကြီးထားရင်တူးသွားမယ်) ပြီးရင်ဆားအချိုမှုန့်ပဲငံပြာရည်အပြစ်နယ်ထားတဲ့ ဝက်နဲ့ဝက်ကလီစာအစုံထည့် နဲနဲဆီသတ်ရေမြုတ်အောင်ထည့်ပြီးပေါင်းအိုးနဲ့ချက်လိုက် နှုးရင် plainကြာဇံကြော်နဲ့ ဝက်သားတုတ်ထိုးကော အရည်လေးပါစမ်းစား ၃၈လမ်းဈေးကနာမည်ကြီးလမ်းဘေးကဆိုင်အတိုင်းဘဲ အရသာပါတူတယ်
on December 29, 2010 at 3:46 am | Reply chowutyee
ချက်နည်းလေးအတွက် ကျေးဇူးပါ နှင်းရေ..🙂
on May 9, 2011 at 7:32 pm | Reply sonesone
အမွှေးအကြိုင်တွေကတော့ ၀ယ်လို့ရတယ်… ၀က်သားက အဲဒီလောက် အမည်စုံအောင် ဘယ်မှာဝယ်လို့ရမှာလဲ… ဒီက Ohio မှာနေတာ..
on May 11, 2011 at 7:05 am | Reply winkaythi
မ၀တ်ရည် ညီမဧည့်သည်အသစ်ပါ ညီမကမြန်မာဆိုင်လေးဖွင့်ထားတာပါ ဆိုင်လာတဲ့သူတွေက၀က်သားတုတ်ထိုးလွမ်းနေကြတာပါ ခက်တာကတစ်ယောက်နှစ်ယောက်စာကိုမြန်မြန်နဲ့ချက်ပြီင်္းဖို့ကမလွယ်ဘူးလေ အသားတွေကလည်းခဲနေတာဆိုတော့ အကြံကောင်းရှိရင်ပေးပါအုံးနော် သူတို့စားချင်တာကိုဖြည့်စည်းပေးချင်တယ် အချိန်မြန်မြန်နဲ့ချက်လို့ရရင်ကောင်းမှာပဲ ခုလိုတင်ပေးတာကျေးဇူးတင်တယ်နော်
on May 30, 2011 at 6:35 am | Reply chowutyee
၀င်းကေသီရေ ၀က်သားဒုတ်ထိုးကို မြန်မြန်နဲ့ ချက်လို့ရအောင် ၀တ်ရည် စဉ်းစားမိသလောက် ပြောမယ်နော်။ အပေါ်အအးခန်း အပေါ်ထပ်မှာ မထည့်ထားပဲ၊ ဧည်သည့် ၂ယောက်စာလောက် ၀က်သားအစုံကို နုယ်ရမယ့် ပစ္စည်းတွေနဲ့ နုယ်ထားပြီ အာက်အအေးခန်းမှာ ထည့်ထားလိုက်ပါ။ ချက်မယ်ဆိုလဲ နုပ်ပြီသား အဆင့်သင့်မို့ ချက်ချင်း ချက်လို့ လွယ်ပါတယ်။ အသားတွေကို မြန်မြန်နူစေချင်ရင် Pressure Cooker အိုးကို အသုံးပြုလျှင် ပိုအကျက်မြန်ပါလိမ့်မယ်။ ၀တ်ရည် ပြောပြတာလေး အထောက်အကူပြုလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးပါနော်…😀
on July 11, 2011 at 9:34 am | Reply chatterbox
အရမ်းအရမ်းကို ကြိုက်တယ်…အိမ်မှာ ချက်စားတိုင်း ဆိုင်တွေ က အရသာနဲ့ မတူဘူး…
on July 23, 2011 at 3:08 am | Reply စံစံ
၀တ်သားတုတ်ထိုးထဲကို ဆား၊ အချိုမှုန့်၊ သကြားထည့်စရာမလိုဘူးလားဟင်။ ဟင်းချက်ရင် အဲ့ဒါတွေက် အမြဲထည့်နေကျဆိုတော့ ပြောစရာမလိုလို့ မရေးတာလား၊ ထည့်ဖို့မလိုလို့လားလို့ပါ။
၀တ်ရည်ရဲ့မီးဖိုချောင်လေးထဲက တိုဖူးသုတ်လုပ်စားပြီးပြီ။ အရမ်းကောင်း။ အခုပဲပြုတ်ပြုတ်နေတယ်။ အရမ်းကို အဆင်ပြေပါတယ်။ အညှောင့်လေးတွေလည်းထွက်လို့ အညိုရောင်လေး။ အရမ်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
on August 10, 2011 at 8:56 am | Reply chowutyee
မလိုတာ စံစံရေ။ ဆားအစား ပဲငံပြာရည် ထည့်တယ်။ သကြားအစား ပျားရည် ထည့်ထားလို့ပါ… လုပ်စားကြည်ပါနော်.. သိချင်တာရှိရင် မေးနိုင်ပါတယ်..
on September 16, 2011 at 4:07 am | Reply Tint lin oo
ဒီ website လည်း တော်တော် အကျိုးရှိတဲ့ website တစ်ခုပါ။လူ့ ဘ၀မှာ စား ၀တ် နေ ရေး
မှာ စားရေးကလည်း အဓိက ထဲက တစ်ခုပါပဲ။ဒါကို ဖွယ်ဖွယ်ရာရာ ဖြစ်အောင် တင်ဆက်ထားတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်…
on September 19, 2011 at 4:17 am | Reply chowutyee
on September 21, 2011 at 4:45 am | Reply nay win
ကျေးဇူးကမ္ဘာ ပါမဝတ်ရည် အဲဒီနည်းကိုသိချင်နေတာကြာပြီ ရောင်းတဲ.လူကိုမေးကြည်.တော.လဲမပြောတော. ကိုယ်ဟာကိုယ်လုပ်စားချင်နေတာ
on December 1, 2011 at 11:27 am | Reply jue
on February 25, 2012 at 5:00 am | Reply စန်း
၀တ်ရည်ရေ ၀က်သားတုတ်ထိုးခုလုပ်နေတယ် ပါဝင်ပစ္စည်းတော့မစုံဘူး🙂 အရမ်း ကျေးဇူးတင်တယ် ချစ်စရာကောင်းတဲ့မျက်နှာလေးနဲ့ နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့ ဟင်းများကိုချက်တတ်လို့လေမချက်တတ်တဲ့တို့လိုလူတွေ.. ၀တ်ရည်ရဲ့ပိုစ်လေးတွေဖတ်လိုက်တာနဲံ့ ချက်ချင်စိတ်ပေါက်လာတယ် ပီးတော့ လွယ်ကူအောင်လဲေ၇းထားပေးလို့.. ကျေးဇူးပါနော်
on February 25, 2012 at 6:23 pm | Reply chowutyee
on February 29, 2012 at 7:17 am | Reply စန်း
ညီမလေးရေ အချိန်ရရင်လေကြက်ဆီထမင်းလုပ်တာလေ ပြောပေးပါအုံးလားအမ ကြက်ဆီထမင်းအိမ်မှာလုပ်စားချင်လို့ပါနော် ကျေးဇူးပါ
on March 7, 2012 at 3:47 pm | Reply chowutyee
ဟုတ်ကဲ့ မစန်း။ ၀တ်ရည် ကိုယ်တိုင်လည်း လုပ်စားပြီတာနဲ့ ချက်နည်းနဲ့တကွ တင်ပေးလိုက်ပါ့မယ်နော်… ၀တ်ရည်ကလည်း ကျေးဇူးပါ
on March 24, 2012 at 9:37 pm | Reply zay
ကြက်သားမှုန့် ကိုဘာကြောင့်သုံးပါသလဲ?အဲဒီအမှုန့် ရဲ့အရသာဟာဝက်သား
on March 28, 2012 at 3:40 pm | Reply chowutyee
ကြက်သားမှုန့်ထည့်တာ အချိုအရသာပါအောင်လို့ပါ။ မထည့်ချင်လည်း သူအစား သကြားအနည်းငယ် ထည့်လို့ရပါတယ်.. လုပ်စားကြည့်ပါနော်
on May 7, 2012 at 8:03 pm | Reply Nandar
Thank you so much Wut Yee. Here in London, pork smells so strong so i can’t eat. I hope your recipe can kill the smell. Will try later.
on May 10, 2012 at 2:49 am | Reply chowutyee
Thanks also! Try it!!!😛
on November 5, 2013 at 4:26 pm | Reply မိုးဖြူ
Thank ma wityee
ညီမလဲ ဒီဇင်ဘာ အိမ်မှာဘာလုပ်စားရမလဲ စိတ်ကူးနေတာ အတော်ပဲ
on November 7, 2013 at 7:34 pm | Reply aungkyawmoe
အသစ်တင်တိုင်းလဲအမြဲအားပေးနေမှာပါ ညီမ အရမ်းကောင်းပါတယ်
on January 6, 2014 at 10:25 am | Reply ခွန်းသံချို
စားချင်နေတာတော့ကြာပါပြီ ဘယ်လိုလုပ်စားရမှန်းမသိလို့ အခက်တွေ့နေတာ အခုတော့ အဆင်သွားပါပြီ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အစ်မ
လာလည်ကြသူများ	1,055,249 လာလည်သူများ	အကြည့်များဆုံး ဟင်းလျာများ	ချက်ပြုတ်နည်းများ	ကြက်ဆီထမင်း	၀က်သားလုံးကြော်	၀က်သားတုတ်ထိုး အိမ်မှာလုပ်စားကြည့်ရအောင်	ပင်လယ်စာပီဇာ နှင့် Ham+နာနတ်သီး ပီဇာ	ဂဏန်း မာဆလာဟင်း	ရန်ကုန် မုန့်ဟင်းခါး (အိုးဘဲဥ)	အုန်းထမင်းနှင့် ကြက်သားဟင်း	တရုတ် ခေါက်ဆွဲကြော်	ငါးပေါင်း ငရုတ်သံပရာဆော့	Archives	Archives